Yakagara iri imwe yekutarisisa kwevanhu, yakagadzirirwa tangi seyakazara inowanzo sanganisira moduli yepasi, iyo yakatenderera bhokisi module, yedenga remba uye yekuisa zvishongedzo zvichingodaro, kunyanya nebhaudhi inosunga pakati pemamojuru akasiyana, saka iwe unofanirwa kuongorora kabhodhi yakagadzirirwa ...
Nekufarirwa kwenzvimbo dzemagetsi dzefotovoltaic, pane mibvunzo yakati wandei yakakosha pamusoro pema photovoltaic akafanirwa mamodule ezvinzvimbo zvemagetsi zve photovoltaic. Chii chinonzi photovoltaic yakagadzirirwa module? Ndezvipi zvakanakira iyo? Chii chinonzi photovoltaic yakagadzirirwa module? Pahwaro ...
Ndeapi matanho ehungwaru ekuyera uye ekudzora e35kV photovoltaic bhokisi shanduri?
Ndeapi akayera akayera uye ekudzora zvishandiso zvebhokisi shanduri yeiyo 35kV photovoltaic simba chiteshi? Kazhinji, pane zviyero uye zvekushandisa zvishandiso musimba, gasi, nharaunda, chengetedzo uye zvimwe zvinhu. Aya majaira anogona kuunganidza, kufambisa uye kushandura iyo data yetran ...
Iwo musimboti uye chimiro cheEuropean mhando bhokisi shanduko inounzwa zvakadzama
Nzvimbo zhinji uye dzakawanda dzekushandisa iyo photovoltaic bhokisi shanduko, bhokisi shanduko uye rakakamurwa kuita European bhokisi shanduko uye American bhokisi shanduko, inotevera Nuo magetsi kuunza musimboti uye chimiro cheEuropean bhokisi shanduko zvakadzama, ndinovimba kukubatsira iwe. European bhokisi mhando chinzvimbo uye netradi ...